Friends of MoeMaKa - Free Burma News Collection | Category | People Profiles
Posted on October 27, 2017 by freeburma
via VOA News: မြန်မာသတင်း http://ift.tt/2gOZs2y http://ift.tt/2rs33WN
Posted in People Profiles	| Leaveacomment |
Posted on August 9, 2017 by freeburma
အဆိုတော်ခိုင်ထူး ပါရမီဆေးရုံတွင် ကွယ်လွန်
တေးသံရှင်အဆိုတော်ခိုင်ထူးဟာ ရန်ကုန် မရမ်းကုန်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ ပါရမီဆေးရုံ အထူးကြပ်မတ်ဆောင်မှာ ဆေးကုသမှုခံယူနေရင်း ဒီနေ့ညနေ ၃ နာရီခွဲလောက်က ကွယ်လွန်သွားပါတယ်။
အဆိုတော်ခိုင်ထူးဟာ ပန်ကရိယကင်ဆာရောဂါနဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်ဆေးရုံကြီးမှာ ဆေးကုသမှုခံယူခဲ့ရပြီး ဆေးသွင်းတဲ့ဒဏ် မခံနိုင်တာကြောင့် မနေ့က မြန်မာနိုင်ငံကို ပြန်လည်ရောက်ရှိလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။
စစ်ကိုင်းလမ်း၊ ခတ္တာ၊ နောက်ဆုံးအိပ်မက်၊ အဝေးဆုံး၊ အားလုံးကို ကျော်ဖြတ်ရမယ် အစရှိတဲ့ သီချင်းတွေအပါအဝင် ပရိသတ်အားပေးမှုများစွာရရှိခဲ့တဲ့ အဆိုတော်ခိုင်ထူးဟာ ကွယ်လွန်ချိန်မှာ အသက် ၆၀ ကျော် ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုတော် ခိုင်ထူးဟာ သူ့ရဲ့ ပထမဆုံးတေးစုအဖြစ် ၁၉၇၉ ခုနှစ်မှာ တေးမြုံငှက်စီးရီး ထွက်ရှိခဲ့ပြီး အဉ္ဇလီ၊ သီချင်းတစ်ပုဒ်ပန်းတစ်ဆုပ်၊ ဆို၊ မကောင်းလည်းကိုယ်ကောင်းလည်းကိုယ်၊ မိုးရဲရင်ဆောင်းရဲရမယ်၊ ရွှေလည်တိုင်နဲ့ အားလုံးကိုကျော်ဖြတ်ရမယ် တေးစီးရီးတွေလည်း ထွက်ရှိခဲ့ပါတယ်။
The post အဆိုတော်ခိုင်ထူး ပါရမီဆေးရုံတွင် ကွယ်လွန် appeared first on DVB.
via DVB http://ift.tt/2vPvstc http://burmese.dvb.no
Posted on May 30, 2017 by freeburma
ကာချုပ်ဟောင်း သူရဦးတင်ဦးကို ရန်ကုန်တိုင်းမှူး သွားရောက်ကြည့်ရှုအားပေး
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ နှလုံးကုသဆောင်မှာ တက်ရောက်ဆေးကုသမှုခံယူနေရတဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် နာယက သူရ ဦးတင်ဦးကို ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ်သက်ပုံက သွားရောက်ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့တယ်လုိ့ တပ်မတော်က သတင်းထုတ်ပါတယ်။
မေ ၂၈ ရက် နေ့လယ်ပိုင်းမှာ တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ်သက်ပုံနဲ့ အဖွဲ့ဝင်တွေက သွားရောက်ပြီး ဦးတင်ဦးရဲ့ ဇနီးဒေါက်တာတင်မိုးဝေ၊ သားဦးသန့်ဇင်ဦးနဲ့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဦးလင်းနိုင်မြင့်တို့ကိုတွေ့ဆုံပြီး ဦးတင်ဦးရဲ့ ကျန်းမာရေး အခြေအနေတွေကို မေးမြန်းကာ စားသောက်ဖွယ်ရာတွေ ပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့ သတင်းမှာဖော်ပြပါတယ်။
အသက် ၉၁ နှစ်အရွယ်ရှိ သူရဦးတင်ဦးဟာ ဦးနှောက်သွေးကြောပိတ် လေဖြတ်ရောဂါနဲ့ မေလ ၁၈ ရက်ကတည်းက ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးမှာ တက်ရောက်ဆေးကုသမှုခံယူနေရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
သူ့ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေဟာ လက်ယာဘက်ခြမ်းမလှုပ်ရှားနိုင်၊ စကားပီသစွာ မပြောနိုင်ပေမယ့် သတိကောင်းစွာရနေပြီး ဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေ မတွေ့ရဘူးလို့ ရန်ကုန်ဆေးရုံအုပ်ကြီးက ပြောထားပါတယ်။
ဓာတ်ပုံ – တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး
The post ကာချုပ်ဟောင်း သူရဦးတင်ဦးကို ရန်ကုန်တိုင်းမှူး သွားရောက်ကြည့်ရှုအားပေး appeared first on DVB.
via DVB http://ift.tt/2siZwrq http://burmese.dvb.no
Posted on May 22, 2017 by freeburma
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD နာယက သူရဦးတင်ဦး၏ လက်ရှိကျန်းမာရေးအခြေအနေနှင့်ပတ်သတ်ပြီး ပါတီ၏ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးဝင်းထိန်ကို ကိုကျော်ကျော်သိန်းက တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါတယ်။ Originally published at – http://ift.tt/2qOWfk9
From: VOA Burmese
via VOA Burmese (uploads) on YouTube https://www.youtube.com/watch?v=bBEKNKSrFYk https://youtube.com/playlist?list=UUv-YbGueeYCp8_CdjgXQD3A
Posted on May 19, 2017 by freeburma
ဦးတင်ဦးရဲ့ ကျန်းမာရေး စိတ်ချရဖို့ ရက်သတ္တပတ် စောင့်ကြည့်ဖို့လို
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် နာယက ဦးတင်ဦးရဲ့ ကျန်းမာရေး အခြေအနေ တိုးတက်လာတယ် ဆိုပေမယ့် ရက်သတ္တ တပတ်ကြာ စောင့်ကြည့်ရဦးမှာ ဖြစ်တယ်လို့ ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးက အထူးကု ဆရာဝန် တွေ က ပြောပါတယ်။
ဦးတင်ဦးရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေဟာ တိုးတက်ကောင်းမွန်လာတယ်ဆိုပေမယ့် အသက်အန္တရာယ် စိုးရိမ်ရတဲ့ အနေအထားကနေ ကျော်လွန်ဖို့ ဆိုတာကတော့ စစ်ဆေးမှုတွေ နဲ့ အတူ စောင့်ကြည့်မှုတွေ ကို တစ်ပတ်လော
via သစ်ထူးလွင် (နေ့စဉ်သတင်း) – Thit Htoo Lwin – Atom http://ift.tt/2rzBqZ4 http://ift.tt/Y2RpwJ
NLD နာယက သူရဦးတင်ဦး ကျန်းမာရေး တိုးတက်မှုရှိ
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီ နာယက သူရဦးတင်ဦးရဲ့ ကျန်းမာရေး အခြေအနေဟာ အရင်နေ့ကထက် ပိုပြီးတိုးတက်လာပြီလို့ တာဝန်ယူကုသပေးနေတဲ့ ဆရာဝန်ကြီး ၁၅ ဦးပါအဖွဲ့ထဲက ဦးနှောက်နဲ့အာရုံကြောဆေးကုဌာန၊ ဌာနမှူး ဒေါက်တာ ၀င်းမင်းသက်က သတင်းထောက်တွေကို ပြောပါတယ်။
via VOA News: မြန်မာသတင်း http://ift.tt/2q4pCNe http://ift.tt/Tf1V41
Posted on May 18, 2017 by freeburma
NLD နာယက သူရဦးတင်ဦး ကျန်းမာရေးအခြေအနေ စိုးရိမ်ရဆဲ
ရန်ကုန်၊ မေ ၁၈ ။ ။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD နာယက သူရဦးတင်ဦး ဦးနှောက်သွေးကြောပိတ်ဝေသနာကြောင့် ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတွင် ကုသမှုခံယူနေပြီး အခြေအနေမှာ စိုးရိမ်နေရဆဲဖြစ်ပြီး စိတ်မချရသေးကြောင်း ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးမှ ဆေးရုံအုပ် ဒေါက်တာအေးကိုကိုက မဇ္စျိမသို့ အတည်ပြုပြောသည်။
“ ကိုယ့်ဘက်ကို မပါသေးပါဘူးခင်ဗျ။ စိတ်မချရသေးဘူးပြောတာ။ ဦနှောက်သွေးကြောပိတ်တာ။ အသက်ကလည်းကြီးပြီဆိုတော့ ပြောလို့တော့မရဘူး။ တခြား Factor တွေလည်းရှိတယ် “ ဟု ၄င်းကပြောဆိုသည်။
နာယကကြီး ဦးတင်ဦးဟာ လက်ရှိသတင်းရေးသားသည့်အချိန် မနက် ၁၀ နာရကျော်အထိ သတိ လစ်နေဆဲဖြစ်ပြီး ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးဦး
နှောက်နှင့် အာရုံကြောအထူးကုသဌာန၊ အထူးကြပ်မတ် ကုသဆောင်၊ အပေါ်ထပ်တွင် ဆေးကုသမှုခံ ယူနေသည် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင် ဦးဥာဏ်ဝင်းက မဇ္စျိမသို့ ပြောသည်။
NLD နာယက သူရဦးတင်ဦးသည် ယမန်နေ့ (မေလ ၁၇) ရက်နေ့ ည ၁၁ နာရီကျော်ကျော်မှာ သူ့ရဲ့ နေအိမ် ရေချိုးခန်းထဲတွင် ချော်လဲ၍ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရခြင်းကြောင့် ရွှေဂုံတိုင်ဆေးရုံကို ပို့ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုမှတစ်ဆင့် ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးကို ပို့ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်သည်ဟု ပါတီအဖွဲ့ဝင် ဦးရန်မျိုးသိမ်း က ၄င်း၏ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာတွင် ရေးသားထားသည်။
ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြော အထူးကုသဌာနရဲ့ အထူးကြပ်မတ်ကုသဆောင်တွင် ကုသမှုခံယူ နေသော ဒီချုပ်နာယက ကြီး ဦးတင်ဦး ကို MRI ရိုက်နေတယ်လို့ ဦးရန်မျိုးသိမ်း ရေးသားချက်အရ သိရသည်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD နာယက သူရဦးတင်ဦး
via Home http://ift.tt/2qyrUGh http://ift.tt/OTcCHv
Posted on April 11, 2017 by freeburma
“ကျမတို့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေကို အားပေးလိုတာက စိတ်ပျက်ဖို့ မလိုပါဘူး”
(၁၆) မြောက် ကေအဲန်ယူ ကွန်ဂရက်အတွင် ကျင်းပသည့် ရွေးကောက်ပွဲအပြီးတွင် ဗဟို ကော်မတီဝင်နှင့် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့များတွင် ပြန်လည်ရွေးချယ်ခြင်းမခံတော့သည့် ၀ါရင့် ကေအဲန်ယူ၏ အမြင့်ဆုံးအမျိုးသမီးခေါင်းဆောင် ကေအဲန်ယူ ဒုဥက္ကဋ္ဌဟောင်း ပဒိုနော်စီဖိုးရာစိန်၏ ကရင်ပြည်သူလူထုနှင့် အသစ်တက်လာသည့် ကေအဲန်ယူ ခေါင်းဆောင်များအတွက် စကားလက်ဆောင်အချို့ ကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
၁၆ ကြိမ်မြောက် ကေအဲန်ယူ ကွန်ဂရက်မှာ ခေါင်းဆောင်သစ်တွေကို ရွေးချယ်တယ်။ အထူးသဖြင့် ဥက္ကဌ၊ ဒုဥက္ကဌ၊ အတွင်းရေးမှူးချုပ်၊ တွဲဘက်အတွင်ရေးမှူး ၁နှင့် ၂တွေကို အသစ်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ အမြဲတမ်းဗဟိုကော်မတီဝင် အသစ်ရွေးချယ်လိုက်တယ်။ လူဟောင်းတွေ ဖြစ်ကြတဲ့ ၁၅ကြိမ်မြောက် ကွန်ဂရက်မှာ အရွေးကောက်ခံခဲ့ရတဲ့ ဒုဥက္ကဌ၊ တွဲဘက် အတွင်းရေးမှူး ၁၊ ၂တွေကတော့ ရွေးချယ်တာ မခံရပါဘူး။ အဲသလိုပဲ အမြဲတမ်းကော်မတီဝင်ထဲမှာလည်း ကျမတို့က ရွေးချယ်ခြင်းမခံရဘူး။ ကျမတို့ကို မရွေးချယ်ပေမယ့် ကျမတို့ သဘောထားကတော့ ကျမတို့ အမျိုးသားရေး အလုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက် ကျမတို့ကို ရွေးချယ်သည်ဖြစ်စေ၊ မရွေးချယ်သည်ဖြစ်စေ ကျမတို့ အမျိုးသားရေးအလုပ်ကတော့ နေရာတိုင်းမှာ ရှိပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ဘယ်အလုပ်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကျမတို့ လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ကျမတို့ အမျိုးသားရေးအတွက် လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘာအခက်အခဲမှ မဖြစ်စေဘူးပေါ့နော်။
အခြေအနေအချို့ အထူးသဖြင့် အချို့သော အပြင်လူအချို့ က ကျမတို့ကို ခေါင်းမာတဲ့သူတွေ ဖြစ်ကြတယ်လို့ယူဆကြတယ်။ အနေအထားကတော့ ကျမတို့က ခေါင်းမာတဲ့လူအနေအထားမှာ ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် ဒီတစ်ကြိမ်မှာတော့ ကျမတို့ကို အမြဲတမ်း ဗဟိုကော်မတီဝင်ထဲမှာ ရွေးချယ်တာ မခံရဘူး။ သို့သော်လည်း ကျမတို့ ထင်တာကလေ အချို့သော နေရာတော်တော်များများက ပြည်သူလူထုတွေက ဒီရွေးကောက်ပွဲ အဖြေထွက်လာတဲ့အခါမှာ ကျမတို့ ပါဝင်စေချင်တာ ရှိကြပါတယ်။ တော်တော် မျှော်လင့်ရှာကြပါတယ်။ အချို့သော ခေါင်းဆောင်တွေက ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာ မပါဝင်လာတဲ့အတွက် အချို့ လူတွေက စိတ်တွေပျက်ကြတယ်ဆိုတာ ကျမတို့ ကြားသိနေရပါတယ်။ သို့သော်လည်း ကျမတို့ ပြည်သူလူထုပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပမှာ ရှိကြတဲ့ ကျမတို့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေကို အားပေးလိုတာက စိတ်ပျက်ဖို့ မလိုပါဘူး။ ကျမတို့ လုပ်နိုင်တဲ့ အမျိုးသားရေးအလုပ်ဆိုတာ အများကြီးရှိပါတယ်။ အမြဲတမ်းကော်မတီဝင်ထဲမှာ ဖြစ်စေ၊ ဗဟို အလုပ်အမှုဆောင်ထဲမှာ ကျမတို့ အရွေးမခံရပေမယ့် အမျိုးသားရေးအတွက် ကျမတို့ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။ ကျမတို့ လက်တွဲကြပြီးပူးပေါင်း လုပ်ဆောင်ကြမယ်။
နောက်တစ်ခု ပေးသိချင်တာက အချို့သော အထင်မှားတာ ရှိပါတယ်။ ကျမတို့က ခေါင်းမာတယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးကို မလိုလားဘူး။ ဒါက မမှန်ပါဘူး။ ကျမတို့က ရွေးကောက်ခံတာဖြစ်စေ၊ မရွေးကောက်ခံရတာ ဖြစ်စေ ကျမတို့ ငြိမ်းချမ်းရေး ချစ်မြတ်နိုးတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်။ ကျမတို့ ပြည်သူတွေ ဖိနှိပ်မှု ဘ၀က အမှန်တကယ် လွတ်မြောက်ချင်တယ်။ ကျမတို့ ပြည်သူတွေ စစ်မှန်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ရစေချင်ပါတယ်။ ကျမတို့ ပြည်သူတွေ စစ်အာဏာရှင် ဖိနှိပ်မှု ဘ၀က အမှန်တကယ် လွတ်မြောက်ဖို့အတွက်က ကျမတို့ရဲ့ မျှော်မှန်းချက်ပါပဲ။ အခုသွားနေတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ဖြစ်စဉ်၊ အခုလုပ်ဆောင်နေတဲ့ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးကို ကျမတို့က အားပေးတယ်။ ပြီတော့ အခု တည်ဆောက်နေတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးက စစ်မှန်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်လာဖို့ ကျမတို့ မျှော်လင့်တယ်။ အထူးသဖြင့် နိုင်ငံရေး မျှော်မှန်းချက်ကို ရရှိဖို့အတွက်က ကျမတို့ စိတ်အားထက်သန် တယ်။ ကျမတို့ အမှန်တကယ် ကြိုးစားပမ်းစား လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျမတို့ မျှော်မှန်းချက်နဲ့ မျှော်လင့်ချက်ပန်းတိုင်ရောက်ဖို့အတွက် ကျမတို့ စိုးရိမ်တာရှိပါတယ်။ ရန်သူရဲ့ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှုတွေ လမ်းကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ လုပ်ဆောင်နေတယ်။ ဒါကြောင့် အခုကျမတို့ သွားနေတဲ့ လမ်းကြောင်းက ကျမတို့စိုးရိမ်တယ်။ ရန်သူရဲ့ လှည့်ကွက်ထဲမှာ မျှောမနေဖို့ဖြစ်စေ၊ သွေးဆောင်ဖျားယောင်းမှုအောက်မှာ ကျမတို့ပါမသွားဖို့ ဖြစ်စေ ဒါတွေကို ကျမတို့ အများစုက စိုးရိမ်မှုတွေ ရှိကြပါတယ်။ သို့သော်လည်း ကျမတို့ ပြောချင်တာက ကျမတို့ အမှန်တကယ် ငြိမ်းချမ်းရေးကို ချစ်မြတ်နိုးကြတဲ့ သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ စည်းလုံးညီညွတ်မှုကို လိုလားတဲ့အတွက် ကျမတို့ ကိုယ့်နည်းကိုယ့်ဟန်နဲ့ ကြိုးစားခဲ့တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဒီ ၄ နှစ်အတွင်း၊ ရှစ်နှစ်အတွင်းမှာ တည်တောက်နေတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်မှုက ကျမတို့ မျှော်မှန်းချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒါက အခု အခြေအနေနဲ့ အချိန်အခါပဲဖြစ်ပါတယ်။
အထူးသဖြင့် အခု ရွေးကောက်ခံရတဲ့ ခေါင်းဆောင်သစ်တွေကို သူတို့ကို ဆန္ဒပြု ဆုတောင်းပေးပါတယ်။ လေးနှစ်သက်တမ်းမှာ သွားဖို့ ဒီကွန်ဂရက်မှာ အမျိုးသားရေးတာဝန်ပေးခြင်းခံရတဲ့အတွက် လုပ်ကို လုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အခက်အခဲတွေကတော့ ရှိကြမယ်ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ရှေ့ဆက်သွားတဲ့ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်မှု ဖြစ်စေ၊ ခိုင်မာတဲ့ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ဖြစ်လာဖို့ ဖြစ်စေ အရေးကြီးတဲ့ ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ခေါင်းဆောင်တွေကို အားပေးချင်တယ်။ ကျမတို့ သွားခဲ့တဲ့ လမ်းကြောင်းက တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေနဲ့သွားခဲ့တယ်။ ကျမတို့တွေ အခြားတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ နည်းတူ အတူတကွ ဖိနှိပ်ခြင်းခံခဲ့ရတယ်။ ဒါကြောင့် တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ အခက်အခဲ၊ နိုင်ငံရေးအခက်အခဲတွေဟာ ကျမတို့ ကရင်တိုင်းရင်းသားတွေလည်း အတူတကွ ဖိနှိပ်ခံရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျမတို့ ရှေ့ဆက် အတူ သွားဖို့အတွက် ကျမတို့ လမ်းကြောင်းရှာကြမယ်။ ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စုကို တည်ဆောက်တဲ့နေရာမှာ ကျမတို့ တိုင်းရင်းသားတွေ အတူတကွ ရရှိဖို့အတွက် ခေါင်းဆောင်တွေကို အားပေးချင်တယ်။ ပြီးတော့ ကျမအားပေးချင်တာက ဘယ်လိုပဲဖြစ်ပါစေ ၁၆ကြိမ်မြောက် ကွန်ဂရက်က ချမှတ်ထားတဲ့၊ ကေအဲန်ယူချမှတ်ထားတဲ့ အခြေခံလမ်းစဉ်တွေဖြစ်စေ တစ်ဆင့်ချင်းတစ်ချင်း အတူသွားကြပြီးတော့ ပြည်သူတွေအတွက် အတူတကွ သွားကြမယ်။ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ ဆက်စပ်မှုများလာဖို့အတွက် ကျမတို့ချမှတ်ထားတဲ့ ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ် အတိုင်းသွားမယ်ဆိုရင် ကျမတို့ လိုလားတဲ့ အတိုင်း ဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။
via Karen Newsletter http://ift.tt/2ouiD2R http://kicnews.org
Posted on March 4, 2017 by freeburma
ဟံသာဝတီဦးဝင်းတင်၏ (၈၇) မြောက် မွေးနေ့ပွဲ Yangon Book Plazaတွင် ကျင်းပမည်
ရန်ကုန်၊ မတ်၎ ။ ။ ဟံသာဝတီဦးဝင်းတင်၏ (၈၇) မြောက် မွေးနေ့ပွဲကို မတ်လ (၁၂) ရက်တွင် Yangon Book Plaza ၌ အမှတ်တရ ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ အဆိုပါ မွေးနေ့ ပွဲတွင် ဘယ်သူလဲဟဲ့ ဦးဝင်းတင် ခေါင်းစဉ်ဖြင့် စာပေလောကတွင် သာမက နိုင်ငံရေးလောကတွင်ပါ အတူတကွ ဖြတ်သန်းခဲ့ကြသူများက ဟံသာဝတီဦးဝင်းတင်အကြောင်း ပြန်လည်အောက်မေ့ မျှဝေသည့် အစီအစဉ်များလည်း ကျင်းပရန် ရှိနေသည်။
“ဆရာကြီးရဲ့ (၈၇)နှစ်မြောက် မွေးနေ့ဖြစ်တယ်။ ထူးခြားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ် စာရေးဆရာတစ်ယောက်အနေနဲ့လည်း
တန်ဖိုးရှိတဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ဆရာကြီးနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ အခမ်းအနားကို ကျင်းပတာဖြစ်တယ်”ဟု Pen Myanmar အတွင်းရေးမှူး ဦးဇော်ဟန်ကပြောသည်။
မွေးနေ့ပွဲတွင် တက်ရောက်လာကြသည့် ကလေးသူငယ်များအတွက်လည်း ဟံသာဝတီဦးဝင်းတင်၏အကြောင်း ပြန်လည်ပြောကြားမှုကို နားထောင်ရန် Yangon Book Plaza တွင် နေရာသုံးနေရာခွဲပြီး စီစဉ်ပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။
“ဒါကတော့ ကွယ်လွန်သွားတဲ့စာရေးဆရာများဖြစ်တဲ့ ဦးသော်ကတို့ ဂျာနယ်ကျော်မမလေးတို့ မောင်ချောနွယ်ရှိမယ် ပြီးတော ဇော်ဇော်အောင်ရှိမယ် အားလုံးကမြန်မာစာပေလောကကို သူ့ဒေါင့်နဲ့သူအကျိုးပြုသွားတဲ့လူတွေကြီးပဲ မေ့ပျောက်လို့မရတဲ့လူတွေကိုအမှတ်ရဖွယ်လုပ်ပေးတာ အင်မတန်ကောင်းပါတယ်"ဟု စာရေးဆရာ သစ္စာနီက ပြောသည်။
ဟံသာဝတီဦးဝင်းတင်၏ (၈၇) မြောက် မွေးနေ့ပွဲအား PEN MYANMAR နှင့် Yangon Book Plaza တို့က ပူးပေါင်းကျင်းပခြင်းဖြစ်သည်။
ဟံသာဝတီဦးဝင်းတင်၏ (၈၇) မြောက် မွေးနေ့ပွဲ
Yangon Book Plaza
via Home http://ift.tt/2mZheNZ http://ift.tt/1nfHMox
Posted on February 1, 2017 by freeburma
၁၉၄၇ ခုနစ်က ပြုလုပ်ခဲ့သည့် သမိုင်းဝင် ပင်လုံစာချုပ် လက်မှတ်ရေး ထိုးရာတွင် သတင်းသွားရောက် ရယူခဲ့
via The Ladies http://ift.tt/2jtSAb0 http://ift.tt/1t35IDK
Posted on January 29, 2017 by freeburma
ရန်ကုန်၊ ဇန်န၀ါရီ ၂၉ ။ ။ တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဦးကိုနီအား အဖ ဦးစူလ်တန်၊ မိခင် ဒေါ်ခင်လှ(ခ) ဒေါ်ဟလီမာတို့မှ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကသာခရိုင်၊ ကသာမြို့နယ်၊ အင်းရွာကျေးရွာတွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။ ကသာမြို့ အထက (၁) ကျောင်းမှ ၁၉၇၁ ခုနှစ်တွင် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်မြင်ခဲ့ပြီး ရန်ကုန်ဝိဇ္ဇာနှင့်သိပ္ပံတက္ကသိုလ်တွင် ပညာဆည်းပူးခဲ့ကာ ၁၉၇၅ ခုနှစ်တွင် B.A(Law) ဘွဲ့ရရှိခဲ့သည်။ ၁၉၇၆ ခုနှစ်တွင် LL.B ( ဥပဒေဘွဲ့) ကို ရရှိခဲ့သည်။
၁၉၇၅- ၁၉၇၆ ပညာသင်နှစ်တွင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ဥပဒေအသင်းကြီး၏ ဒုဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ၁၉၇၇ မှ ၁၉၇၉ ခုနှစ်အတွင်း ရန်ကုန်အဝေးသင်တက္ကသိုလ်၊ ဥပဒေပညာဌာနတွင် နည်းပညာဆရာအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
၁၉၇၆ ခုနှစ်တွင် ဥပဒေဘွဲ့ရရှိပြီးနောက် အဝေးသင်တက္ကသိုလ်တွင် နည်းပြဆရာအဖြစ် ထမ်းဆောင်ရင်း ဆရာကြီးဦးကိုယုထံတွင် အလုပ်သင်ရှေ့နေ၊ အမှုလိုက်ရှေ့နေအဖြစ် လုပ်ကိုင်ခဲ့ကာ၁၉၉၅ ခုနှစ်တွင် Laurel Law Firm ကို တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ပြီး ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
ဇနီး ဒေါ်တင်တင်အေးနှင့် သားသမီး ၃ ဦး ရှိပြီး သမီးကြီး ဒေါက်တာယဉ်နွယ်ခိုင်၊ ဒေါက်တာအေးသီခိုင်၊ သားငယ် ကိုသန့်ဇင်ဦး (စင်ကာပူ) တို့ဖြစ်ပြီး အမှတ် ၁၈၀ (အပေါ်ဆုံးထပ်)၊ ၃၇ လမ်း(အလယ်)၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့တွင် နေထိုင်ကာ ယနေ့ ကွယ်လွန်ချိန်တွင် အသက် ၆၁ နှစ်ရှိပြီဖြစ်သည်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ၏ ဗဟိုဥပဒေအဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင် တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေလည်း ဖြစ်ပြီး ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ အင်ဒိုနီးရှားလေ့လာရေးခရီးစဉ်လိုက်ပါပြီး လေဆိပ်ပြန်လည်ရောက်ရှိလာစဉ် သေနတ်နှင့် ပစ်ခတ်လုပ်ကြံခံရခြင်းဖြစ်သည်။
via Home http://ift.tt/2kBJVQL http://ift.tt/1nfHMox